Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Oo ka hadlay Dibadbaxyadii ka dhacay wadankiis. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Oo ka hadlay Dibadbaxyadii ka dhacay wadankiis.
On Oct 27, 2019 434 0
Abey Axmed, ra’iisul wasaaraha wadanka Itoobiya oo markii ugu horeysay ka hadlay dibad baxyadii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay wadanka, islamarkaana looga soo horjeeday maamulkiisa ayaa shaaca ka qaaday in gacanta lagu soo dhigi doono dadkii soo abaabuley dibad baxyadaas.
Abey Axmed ayaa war uu soo saaray wuxuu sheegay in dibadbaxyadii Arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Adis Ababa iyo guud ahaan gobolka Oromada ay dhaliyeen dhimashada 67 ruux.
“Qalalaasaha aan wajahney waxay noqon doonaan kuwa sii soo socda oo adkaada, haddii aaney Itoobiyaanku midoobin oo aaney noqon hal saf” ayuu ku yiri Abey Axmed war saxaafadeed kasoo baxay xafiiskiisa.
Wuxuu intaa ku daray in gacanta lagu soo dhigi doono, maxkamadna lasoo taagi doono dadkii soo abaabuley kacdoonnada dhaliyay khasaaraha tirada badan, taas oo uu dabcan kala jeedo Jawar Mohammed oo kamid ah mucaaradka ugu awooda badan.
“Waxaan ka shaqeyn doonnaa sidaan sharciga iyo cadalaadda ula tiigsan lahayn dadkii soo abaabulay dibadbaxyadaas” ayuu yiri Abey Axmed ra’iisul wasaaraha Itoobiya.
Banaanbaxyada todobaadkii hore ka dhacay wadanka Itoobiya ayaa yimid kadib markii Jawar Maxamed oo ah mucaarad kasoo jeeda qowmiyadda Oromada uu baraha uu ku leeyahay Internetka kusoo qoray in Police-ku ay qorsheynayaan iney ku xadgudbaan.
Hadalkaas kadib ayaa waxaa laamiyada iyo wadooyinka waaweyn isugu soo baxay dad aad u careysan oo kamid ah taageeriyaashiisa, kuwaas oo wajahay weeraro uga yimid ciidamada Amaanka.
Sida uu sheegay taliyaha Police-ka gobolka Oromada ay degto oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee Adis Ababa ayaa shaaca ka qaaday iney dhinteen 67 ruux, sidoo kalena ay dhaawacmeen inkabadan 200 oo ruux.
Dadka ugu badan waxaa si bareer ah u toogtay ciidamada Amaanka Itoobiya, balse wuxuu taliyaha Police-ka gobolka Oromada uu sheegay in dadka qaar ay ku dhinteen iska hor imaad dhexmaray taageeriyaasha Ra’iisul wasaaraha iyo Jawar Maxamed.
Banaanbaxyadan waaweyn ee gacan ka hadalka wata, islamarkaana ka dhaca wadanka Itoobiya ayaa markale banaanka soo dhigaya mucaaradada xoogan ee uu wajahaya ra’iisul wasaaraha wadankaas ninka lagu magacaabo Abey Axmed.